Godane Oo Baaq U Diray Somaliland & Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Godane Oo Baaq U Diray Somaliland & Puntland
Hargeysa (Keydmedia) - Horjoogaha kooxda Shabaabka Mr.Axmed Cabdi Godane ayaa Baaq u diray Dadka Somaliland iyo Puntland isagoo ugu baaqay in ay Maamuladaas ka hor yimaadaan.
“Ugu horeyn waxaan leenahay dadka ku nool deegaanadaasi waa inay iska saaraan wahsiga iyo cabsida waayo maamuladaasi waa kuwo aad u taagdaran waqtigan la joogo” ayuu yiri Axmed Godane oo tusaale u soo qaatay kacdoonadii dadweyne ee sanadkii dhamaaday 2011 hareeray dunida Carabta xilkana looga tuuray hogaamiyaashii Carabta ugu awooda badnaa sida Mucammar al-Qadaffi iyo Xusni Mubaarak.
“Deegaanadaasi waxaa kajira dulmi iyo dadkii diinta iyo culimadii oo la dhibayo. Wax ay isdhamaan ma jirto kuwo hadda jooga iyo kuwii hore”, ayuu yiri mar uu si gaar ah uga hadlay maamulka Hargeysa kajira ee uu madaxweynaha ka yahay Axmed Siilaanyo.
“Nidaam kasta oo noocaasi ah waa xaqiiq inuu ridoobay oo uu diinta kabaxay”, ayuu hadalkiisa ku dii daray Godane oo soo qaatay Aayado Quraan ah.
Wuxuu intaa ku daray in cidii ka dooda arintaasi- xitaa ay culimo tahay ay iyana ku gaaloobeyso.
Reer Puntland iyo Shabaabka
“Si guud waxaan u dardaarmayaa inay Alle ka cabsadaan xaqana ku taagnaadaan” ayuu yiri Axmed Godane. Wuxuu sheegay inuu isagu u arko dadka ku nool Puntland inay yihiin “mustadcafiin” [dad laga awood badan yahay], siduu hadalka u dhigay.
Horjoogaha Shabaabka wuxuu isagoo sidegan u hadlaya soo tiriyey magacyo dad uu sheegay inay ka soo jeedaan Puntland iyo Somaliland oo ku “shahiiday” dagaaladii ka dhacay dalka ee ay horseedka ka ahayd kooxdaAl-Shabaab.
“Waxaan xusuusin lahaaa bulshada ku dhaqan Puntland inay xusuusnaadaan kaalintii ay “JIHAADKA” ku lahaayeen inaan marnaa jidkii walaalaheen sida walaalkeen SHEEKH BASHIIR, MAXAMED CABDI FAARAX, SHEEKH C/LAAHI, SHEEKH KHOZT“, ayuu yiri Axmed Godane.
Deegaanka Soomaali Galbeed
Axmed Godane waxaa wax laga weydiiyey heshiiskii dhexmaray jabhada UWSLF ee dagaalka kula jirtay dawlada Ethiopia iyo saameynta Al-Shabaab ay ku yeelatay arintaasi.
“JIHAADKII Soomaali Galbeed wuxuu ahaa mid taariikh leh waana meeshii asalka u ahayd mujaahidiinta sida jihaadkii “HALOWIN oo ay ku shahiideen rag ay ka midahaayeen SHEEKH MUSTAF CARAB, C/LAAHI DAAUUD” ayuu yiri Axmed Godane.
Wuxuu ugu baaqay dadweynaha Soomaali Galbeed inay hubka qaataan ayna dagaalka sii wadaan isagoo “kooxo khiyaanoolayaal ah” ku tilmaamay hogaanka UWSLF ee heshiiska nabadeedsanadkii 2010 la gashay Ethiopia.
Wareysigan oo ay siidaysay idaacada Andalus ee ku hadasha AfkaAl-Shabaab ayaa ka koobnaa dhowr saacadood. Waxaana xalay idaacadu sheegtay in wareysiga uu ahaa kulankii ugu horeeyey ee Axmed Cabdi Godane uu la yeesho qof wareysi ka qaadaya.
Axmed Cabdi Godane oo ah nin aad ugu xiran hogaamiyaasha Al-Qaacida ayaan marnaba iman meelaha fagaarayaasha. inta badan waa hagooganyahay aadna waxuu uga taxadaraa amaankiisa.Inta badan lama hadlo warbaahinta ee waxuu adeegsadaa Cajaladdo u soo diyariyey kuwaasoo warbaahintu durbadiiba la boodo.